Imboni Yemikhiqizo | Abakhiqizi Bemikhiqizo YaseChina, Abahlinzeki
2022 Imboni Entsha Yokufika Di...
Itiye Elisha Lobisi Lerobhothi Lemfashini ...
Isisetshenziswa esizenzakalelayo esiphelele R...
Imfashini kanye ne-Orde elula...
I-robot barista coffee kiosk ...
Umsebenzi oshumekiwe werobhothi...
2022 Ifekthri Entsha Yokufika Eqondile Ethengisa I-Mini Robot Coffee Kiosk
I-Mini robot coffee kiosk, i-MOCA Mini-series iklanyelwe ngokukhethekile izimo zokufaka izicelo zasendlini njengesitolo sezincwadi, ikhampasi, umtapo wolwazi, isakhiwo samahhovisi, inxanxathela yezitolo nokunye. Zonke izinqubo zokwenza ikhofi zisebenza ngengalo yerobhothi ehlanganyelwe ngokuzenzakalelayo nenkomba yokukhanya yesikhathi sangempela, ebonisa inqubo yamanje yokwenza ikhofi. Kukhona ukucushwa okuthathu okuyinhloko kwe-MOCA Mini-series. I-MOCA Mini (yamazwe ngamazwe), i-MOCA Mini-ice (yamazwe ngamazwe) kanye ne-MOCA Mini-commercial (yamazwe ngamazwe) ngokulandelanayo. Zonke zenzelwe izicelo zamazwe ngamazwe ngohlelo lokusebenza lwesiNgisi kanye nemibhalo esekelayo. Ngaphandle kwalokho, futhi inesici esikhethekile, okuwumsebenzi wokuphrinta ubuciko bekhofi.
Isitolo sekhofi se-Robot barista esinekhofi econsayo
I-Robot barista coffee kiosk ene-drip coffee MCF031A yakhelwe izimo zokusebenza zasendlini njengenxanxathela yezitolo, ibhilidi lamahhovisi, isikhumulo sezindiza nezinye izindawo ezinendawo ebanzi yangaphakathi nombono obanzi, unikeza abathengi iziphuzo zekhofi ezinongiwe ezenziwe umshini wekhofi ozenzakalelayo futhi ibhodwe lokuhlunga. Zonke izinqubo zokwenza ikhofi ziqhutshwa yizingalo zamarobhothi ezisebenzisanayo ngokuzenzakalelayo ngokuhambisana nemiyalo ebekwe ku-inthanethi noma endaweni ngabathengi. Ingalingisa i-barista yangempela ukwenza izinhlobo ezahlukene zeziphuzo zekhofi ngokusebenzisa izinqubo ezimbili ezahlukene zokwenza ikhofi.
Isitolo Sekhofi Esenziwe ngokwezifiso I-Robot Barista Coffee Kiosk
I-Robot barista coffee kiosk i-MCF021A yakhelwe izimo zokufaka izicelo zasendlini njengenxanxathela yezitolo, isakhiwo samahhovisi, isikhumulo sezindiza nezinye izindawo ezinendawo ebanzi yasendlini nombono obanzi, unikeza abathengi iziphuzo zekhofi ezinongiwe ezenziwe umshini wekhofi ozishintshayo. Zonke izinqubo zokwenza ikhofi zisebenza ngengalo yerobhothi ehlanganyelwe ngokuzenzakalelayo ngokuhambisana nama-oda abekwe ku-inthanethi noma endaweni ngabathengi. Ingakwazi ukuhlangabezana nokuthandwa okuhlukile kwabathengi futhi ingenza iziphuzo zekhofi ezisekelwe obisini ngakho kokubili ubisi lwenkomo nobisi lukakhukhunathi.
Robot ubisi itiye esiteshini ongaphandle
Isiteshi sangaphandle setiye lobisi lwerobhothi i-MTD011A yakhelwe izimo zohlelo lwangaphandle njengefestival yokudla, imisebenzi yangaphandle, imigubho nokunye kucatshangelwa ukuguquguquka kokuthunyelwa. Umhlobiso walesi siteshi setiye sobisi ungalungiswa ngokuya ngezimo ezihlukene zohlelo lokusebenza. Njengoba lo mkhiqizo uklanywe njengohlobo oluvulekile, ungahlanganiswa kalula futhi uhlakazwe esizeni. Ngaphandle kwalokho, ukugcwalisa kabusha izinto kulula ukuphatha nganoma yisiphi isikhathi. Isiteshi setiye sobisi lwerobhothi singenza itiye lobisi lweparele, itiye lezithelo netiye iyogathi ngokulandelana. Zonke izinqubo zokwenza isiphuzo ziqhutshwa ngengalo yerobhothi ehlanganyelwe ngokuzenzakalelayo njengokuyalelwa kwesikrini esithintwayo endaweni enezinhlelo zokukhokha ezisekela inkokhelo ye-WeChat kanye ne-Alipay. Ukunambitheka kweziphuzo no-ayisikhilimu kungalungiswa abantu ngabanye ngokushintsha izinga likashukela, izinga lokushisa lesiphuzo kanye nenani eliqinile lesengezo ngokulandelanayo.
I-robot barista ishumekiwe indawo yokusebenza
Isiteshi sokusebenzela esishumekiwe se-robot barista i-MCF041A yakhelwe isimo sokusetshenziswa kwesitolo sekhofi njengomshini wobuciko we-latte, onikeza abathengi ikhofi elivamile nekhofi lobuciko be-latte elicishe lifane nele-barista yangempela. Zonke izinqubo zokwenza ikhofi ziqhutshwa ngengalo yerobhothi ehlanganyelwe ngokuzenzakalelayo. I-oda lenziwa ngu-opharetha. Isenzo sokuqala sika-opharetha sithatha inkomishi engenalutho bese siyibeka endaweni yokuqala. Bese ukuthinta okukodwa ukuze uqale ukwenza ikhofi.
I-Automatic Equipment ngokugcwele Isitolo se-Robot Teapresso
Isitolo se-robot teapresso i-MTD021A yakhelwe njengohlobo oluvulekile lwezimo zesicelo sasendlini njengesitolo setiye sendabuko. Ingenza itiye lesiShayina elisha phakathi nemizuzwana engama-20. Inqubo isekelwe kubuchwepheshe obusha bokukhipha ikhofi obufana nobuchwepheshe bokukhipha ikhofi entshonalanga. Ukunambitheka kuyafana netiye elenziwe inqubo yendabuko yokwenza itiye. Ukugcwaliswa kabusha kwezinto kulula ukuphatha nganoma yisiphi isikhathi kuncike ekusetshenzisweni kwangempela. Zonke izinqubo zokwenza itiye ziqhutshwa ngengalo yerobhothi ehlanganyelwe ngokuzenzakalelayo.
Isitolo Setiye Semfashini Yerobhothi Entsha Yezimo Zesicelo Sangaphakathi
I-robot milk tea kiosk i-MTD031A yakhelwe njengendawo evalekile yohlobo lwezimo zokufaka izicelo zasendlini njengenxanxathela yezitolo, inyuvesi, ibhilidi lamahhovisi, ihabhu yezokuthutha nezinye izindawo zasendlini. Lesi sitolo setiye sobisi irobhothi sifakwe ingalo eyodwa yerobhothi ukwenza iziphuzo ezibandayo ngokwemiyalo ebekwe ku-inthanethi ngamasistimu okukhokha asekela inkokhelo ye-WeChat kanye ne-Alipay. Zonke izinqubo zokwenza iziphuzo ezibandayo zisetshenziswa ingalo yerobhothi ehlanganyelwe ngokuzenzakalela enenkomba yokukhanya yesikhathi sangempela, ebonisa inqubo yamanje yokwenza itiye. Lesi sitobha setiye sobisi sihlanganisa uchungechunge lweziphuzo ezintathu, itiye lobisi lweparele, itiye lezithelo netiye iyogathi ngokulandelana. Ama-flavour angashintshwa abantu ngabanye ngokushintsha izinga likashukela, izinga lokushisa lesiphuzo kanye nenani eliqinile lesengezo. Ngaphandle kwalokho, umsebenzi okhethekile we-oda langaphambili ungenza abathengi kube lula ukubeka ama-oda kusenesikhathi futhi bathole iziphuzo ngaphandle kokulinda.
Isitolo Sokuphuzwa Kweqhwa Lomkhiqizo Odayiswa Kakhulu
Isitolo sesiphuzo seqhwa serobhothi i-MMD011A yakhelwe izimo zesicelo sangaphandle njengefestival yokudla, imisebenzi yangaphandle, imigubho nokunye kucatshangelwa ukuguquguquka kokuthunyelwa. Umhlobiso walesi sitolo sesiphuzo seqhwa ungalungiswa ngokuya ngezimo ezihlukene zohlelo lokusebenza. Njengoba lo mkhiqizo uklanywe njengohlobo oluvulekile, ungahlanganiswa kalula futhi uhlakazwe esizeni. Ngaphandle kwalokho, ukugcwalisa kabusha izinto kulula ukuphatha nganoma yisiphi isikhathi.
Imfashini kanye ne-Elular Ordering Robot Receptionist
Uku-oda umamukeli wamarobhothi i-MOF011A yakhelwe ngokukhethekile uku-oda ngesikrini esithintwayo esingamayintshi angu-21. Lo mkhiqizo ngokuyisisekelo uyindlu yesikrini esithintwayo futhi ungahlonywa ikhiyoski yokuthengisa irobhothi enomyalo ozwakalayo wokusekela abathengi ukuqedela inqubo yoku-oda.
Umshini wokuthengisa weziqholo ongumakhalekhukhwini
Umshini wokuthengisa wamakha weselula i-MBF011A kanye ne-MBF021A yakhelwe ngokukhethekile uhlelo lwenxanxathela yezitolo ngomsebenzi weselula oqhutshwa i-AGV. Abathengi bangamisa umshini wokuthengisa nganoma yisiphi isikhathi, bezama amasampula wamakha futhi bakhethe ibhodlela eliyintandokazi yamakha ngohlelo lokukhokha endaweni.
I-robot barista coffee kiosk enokudla okulula
I-Robot barista coffee kiosk enokudla okulula i-MMF011A yakhelwe izimo zokusebenza zasendlini njengenxanxathela yezitolo, ibhilidi lamahhovisi, isikhumulo sezindiza, ihabhu yezokuthutha nezinye izindawo ezinendawo ebanzi yasendlini kanye nombono obanzi. Umkhiqizo uklanywe njenge-kiosk yohlobo evalekile enamasethi amane ezingalo zamarobhothi asebenza ndawonye, ​​enikeza abathengi ngekhofi, u-ayisikhilimu, ijusi kanye nokudla okulula. Zonke izinqubo zokwenziwa kweziphuzo nokudla ziqhutshwa yizingalo zamarobhothi ezisebenzisanayo ngokuzenzakalelayo njengemiyalo ebekwe esibukweni sokuthinta esisekelweni ngezinhlelo zokukhokha ezisekela inkokhelo ye-NFC. Kunezigaba ezine seziphelele ezinamafasitela amane okulethwa ukuze anikeze zonke izinhlobo zokudla neziphuzo kubathengi.
Ngemibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma uhlu lwamanani, sicela usishiyele i-imeyili futhi sizokuthinta kungakapheli amahora angama-24.
Igumbi 305, Block A, Building E17, Shenyang International Software Park, Shenyang, Liaoning Province, China. 110170.
© Copyright - 2010-2021 : Wonke Amalungelo Agodliwe.
Chofoza u-enter ukuze useshe noma u-ESC ukuze uvale